Iyo qaar ka mid ah netiquette ee comments on apg29
Christer Åberg sida emoji ah.
Cajiib ah sida ay u muuqan kartaa, waxaa jira dhowr (Fiiro gaar ah: a yar) oo si joogto ah isu heli safka fashion aan weligood u muuqdaan sida isbedelka.
Iyo qaar ka mid ah netiquette ee comments on apg29.
1️⃣ Mararka qaarkood dad fiican u yimid inuu qaadkeedii ahaa in comments ah. taladaydu waa in aan bilaabi hadlayaan iyo soo horjeeda midba midka kale. Waxaad ku qori fikradaada, ka dibna wuu wanaagsan yahay.
Waxay midba midka kale sida aad rabto in lagu daaweeyo daweeyo, haddii kale waa isticmaalka lahayn in ay wax qortaan.
2️⃣ Do wax aan habboonayn ee comments ka, waxaad u sheegi kartaa ii. Comments comments in su'aasha deletade had iyo jeer ku Abaal marin by qaadato deletade. Apg29 marnaba sharxayaa sababta a comment waa deletad. Tani waa in ay is-faham.
3️⃣ Haddii aad rabto in aad dhaleeceeyo apg29 ama wada hadlaan wax igu saabsan (Christer Åberg), aad meel kale u samayn karaa, laakiin halkan ma joogo.
4️⃣ Haddii lagu weydiiyo in aad safka dhexdhexaad ah oo jeclaan lahaa inuu dib ugu soo laabto iyo comment, ka dibna waxa ay tahay oo keliya in aad wanaagga Netiquette 🙂 in ay sii.
5️⃣ faafinayeen waxbarista qaldan dabcan lama ogola. Wargaysyada kuwaas oo waxan u samaynaysaan waa deletade oo ballan-qaaday in safka dhexdhexaad ah.
6️⃣ Wargaysyada kuwaas oo kaliya uu ka hor waxa ku qoran articles waxaa ka dhigi kartaa meel kasta oo kale, laakiin halkan ma joogo.
7️⃣ Dabcan, illegalities ma yeeleen.
❗️ Cajiib ah sida ay u muuqan kartaa, waxaa jira dhowr (Fiiro gaar ah: a yar) oo si joogto ah isu heli safka fashion aan weligood u muuqdaan sida isbedelka.
❤️ Laakiin mahad oo dhan oo idinka mid ah, kuwaas oo si fiican u dhaqma oo qoray comments fiican leh midab jacaylka iyo badbaadada indhahana! Waxaad ku abuureen jawi aad u fiican on apg29 iyo faafin udgoonka la yaab leh!
✔️ Sharcigani dabcan Daygii aad. Laakiin in ay ogaadaan in ay jirto bönesida ah iyo ma page hadal ama "page Printer". Wax kasta oo aan ahayn salaadda ama deletas tacksägelseämnen.
✔️ aan farta dadka magaca magaciisa buuxa, oo waxay khuseysaa aad qoraal ahaan.
✔️ Klagoböner, salaadda aargoosi iyo hatböner cad waa soo dhaweynayaa ma.
✔️ Fadlan badbaadinta indhahaaga marka aad soo dirto bönämnen.
Haddii aad qabto wax in la yidhaahdo oo ku saabsan Eeboo in mabaadi'da Christian si fadlan nala soo qori akhristaha e-mail ah! email waa in uu ahaadaa ugu yaraan 300 erayo laakiin doorbidayaa 500 ama ka badan. Markhaati fura wax Ciise ku saabsan, badbaadada, baabtiiska, baabtiiska Ruuxa, salaadda u jawaabay oo ku Ciise la socon. Waxaa lagama maarmaan ah in waqtigan waxaan ku nool nahay!
Waxaad kartaa mail e-si toos ah in apg29 ama daabacato akhristaha e-mail in this form .
Xusuusnow in emails akhristaha iyo comments leeyihiin fikrado iyaga u gaar ah. Haddii ay ugu qoran tahay fikrad ah in aanan la wadaagin, waxaad ii kuma canaanan karaan, waayo! "Xadgudubka by ururka" ( ururka daynta ) aan halkan ka mid ahaa!
Tani waxay sidoo kale khuseysaa articles iyo videos in aan la iga dhigay by, ama haddii aan waraysi qof aan studio aanan la wadaagin opinion la mid ah la.
Laakiin sida ku faraxsanahay inaan ahay in adiga iyo qaar badan oo kale booqo website my blog apg29 iyo eegno at my daayaa live kala duwan!
iyaga ku faraxsan yahay dad badan oo wadaag in ay tahay uhelin suurto gal ah!
Ilaah ha idiin barakeeyo faro badan oo ay leeyihiin waxaa aad u fiican!
Vecka 23, söndag 13 juni 2021 kl. 19:25